Kornayl Tuke Oo Maanta Maxkamada Mareykanka Ku Taala La Soo Taagay - Ilays News
Kornayl Tuke Oo Maanta Maxkamada Mareykanka Ku Taala La Soo Taagay
Sarkaal Soomaali ah oo deggan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka ayaa maxkamad rayid lala koray, ayada oo lagu eedeynayo xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha, oo uu gaystay xilli uu sarkaal sare ka ahaa dowladdii Maxamed Siyaad Barre.
Dacwad madani oo ka dhan ah Yuusuf Cabdi Cali ( Tuke ) ayaa toddobaadkan ka billaabatay maxkamadda federaalka ee magaalada Alexandria ee gobolka Virginia, waxaana la koray Farhan Mohamoud Tani Warfaa.
Farhan ayaa ku eedeeyey Yuusuf inuu jidh -dilay, islamarkaanauu geeri ku sigtay sanaddii 1988-kii.
Dacwaddan ayaa lagu sheegay in Yuusuf uu ahaa taliye ku tirsan Guutada Shanaad ee Ciidamadii Xoogga Dalka ee ku sugnaa Somaliland gaar ahaan magaalada Gabilay
Yuusuf ayaa lagu eedeeyey inuu Farhan iyo rag kale oo dad’yar xidhay 1987-kii, isaga oo wax ka weydiinaya haan biyo oo la waayey.
Farhan ayaa sheegay inuu dhowr bil xidhnaa, markaasi oo dhowr mar dharka laga dhigay lana garaacay, sida uu sheegay.